Imephu yokuxhumanisa: iyini futhi ihunyushwa kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sibona i- hlela imephu kumele sazi ukuthi singalihumusha kanjani ngoba lingasinika imininingwane eminingi ngezindawo elivezayo. Le mephu isebenzisa uhlelo lokuxhumanisa indawo, okuyisistimu ebhekisela kunoma iyiphi indawo ebusweni bomhlaba. Ukwenza lokhu, isebenzisa izixhumanisi ezimbili ze-angular okuyi-latitude nobude.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungayichaza kanjani imephu yokuxhumanisa nokuthi ibaluleke kangakanani, lokhu okuthunyelwe kwakho.
1 Yini imephu yokuxhumanisa
2 Ukufana okukhethekile ebalazweni lokuxhumanisa
3 AmaMeridiya ebalazweni lokuxhumanisa
4 I-Latitude nobude
Yini imephu yokuxhumanisa
Imephu yokuxhumanisa yileyo esebenzisa uhlelo lokuxhumanisa ngokwezindawo ngezixhumanisi ezimbili ze-angular: latitude, ekhombisa inyakatho, iningizimu enhle, nobude obungakhombisi empumalanga noma entshonalanga. Uma sifuna ukwazi ama-engeli asemaceleni obuso bomhlaba maqondana nendawo maphakathi nomhlaba, kufanele nje sihambisane ne-eksisi yawo yokujikeleza.
Ukwazi ukuthi yini imephu yokuxhumanisa, kufanele sazi imiqondo ethile eyisisekelo. Into yokuqala ukwazi ukuthi yini ukufana. I-Ecuador iyisekisi elicatshangelwayo eliqonde ngqo ku-eksisi yokuzungeza komhlaba. Ngakho-ke, umbuthano owodwa. Ngaphezu kwalokho, Inesici esiyinhloko sokuthi ilingana ngokulingana nezigxobo futhi yiyo ehlukanisa iplanethi yethu ibe ama-hemispheres amabili. Engxenyeni esenyakatho sine-hemisphere esenyakatho, equkethe i-hemisphere esukela ku-Equator iye esigxotsheni esisenyakatho. Ngakolunye uhlangothi, sinenkabazwe eseningizimu engenye yezindawo ezisukela e-Equator kuye esigxotsheni esiseningizimu. Esigodini esiseningizimu kune-Antarctica.
Kokubili enyakatho naseningizimu ye-Equator kukhona ukufana futhi zilandelana kwemibuthano emincane ye-Equator. Le mibuthano noma eyokucabanga futhi iba mincane njengoba isondela emapalini. Ibanga phakathi kombuthano ngamunye liyafana, ngakho-ke laziwa njengokufana.
Ukufana okukhethekile ebalazweni lokuxhumanisa
Sizokuchaza ukuthi yini ukufana okuthile kumephu yokuxhumanisa. Okuyinhloko esinakho yi-tropic yomdlavuza ne-tropic ye-capricorn. Lokhu kufana okubili yikhona okuphawula amaphuzu asenyakatho naseningizimu kakhulu ye-Equator. Kulezi zindawo kulapho imisebe yelanga iwela mpo. Lokho wukuthi, yizindawo eziphakeme futhi eziphakeme kakhulu ilanga elikwazi ukufinyelela kuzo ekuhambeni kwalo okubonakala minyaka yonke.
Ngakho-ke, siyazi ukuthi i-solstice yasehlobo iphakathi kuka-Juni 21 no-22. Phakathi nalolu suku ilanga libonakala ngqo phezu kweTropic of Cancer futhi libukeka ngokuphelele ebusweni bomhlaba. Ngakolunye uhlangothi, endaweni eshisayo yaseCapricorn, imisebe yelanga imvamisa ibukeka ebusweni bomhlaba phakathi nenkathi yasebusika, cishe ngoDisemba 23.
Okunye ukufana okubili okubalulekile yi-Arctic Circle ne-Antarctic Circle. Lawa amaka amaphuzu asenyakatho naseningizimu ye-Ecuador lapho ilanga lingashoni khona emkhathizwe noma ngqo lingaphumi. Kulapha lapho sinezinsuku ezigcwele ngaphandle kobusuku noma ubusuku obugcwele ngaphandle kosuku. Ukusuka kuleyo mibuthano ebheke ezigxotsheni ezifanele, inani lezinsuku futhi liyanda kuphela bese liyancipha kuze kube seqophelweni lapho izigxobo zilandela khona izinyanga eziyisithupha zobumnyama nezinye izinyanga eziyisithupha zokukhanya. Imibuthano yePolar ibanga elifanayo ukusuka ezigxotsheni njengasezindaweni ezishisayo zase-Equator.
AmaMeridiya ebalazweni lokuxhumanisa
Ezinye izici ezibalulekile zemephu yokuxhumanisa yi-meridians. Ama-meridians yizicucu ezisuka ezigxotsheni futhi zibheke ngqo ku-Equator. Masingakhohlwa ukuthi zonke lezi zinto zebalazwe lokuxhumanisa ziyizicabha. Zisetshenziswa kuphela ukusungula izixhumanisi endaweni ethile. I-meridian ngayinye yakhiwa ama-semicircle amabili, elinye liqukethe i-meridian okukhulunywa ngayo kanti enye i-meridian ephambene. Elasempumalanga lisempumalanga ye-meridian ebhekiwe kanti eyasentshonalanga isentshonalanga.
Ama-meridian 0 degrees yiwona adlulayo iGreenwich Observatory eseLondon, ngakho-ke yaziwa ngegama le-meridian yeGreenwich. Le meridian yiyo ehlukanisa umhlaba ube ama-hemispheres amabili: i-hemisphere esempumalanga noma esempumalanga etholakala empumalanga ye-meridian esentshonalanga kanye ne-hemisphere esentshonalanga noma empumalanga etholakala entshonalanga yawo.
Lezi zinto ezimbili zibaluleke kakhulu ebalazweni lokuxhumanisa. Noma iyiphi indawo ebusweni bomhlaba ingabhekiswa empambanweni yokufana kanye ne-meridian. Yilapho ukuhlangana kobubanzi nobude kuvela khona. I-Latitude yilokho okunikeza indawo yendawo kungaba enyakatho noma eningizimu kusuka e-Equator. Ivezwa ngezilinganiso ze-angular ezisukela ku-0 degrees kuye ku-90 degrees. Kubizwa ngamadigri asenyakatho namadigri aseningizimu. Uma siphatha umugqa osuka ephuzwini uye maphakathi nomkhakha, i-engela eyenziwa yilayini ngalolu hlelo lwe-equatorial izoba yi-latitude yalelo phuzu.
Ama-degree e-latitude ngokuvamile ahlukaniswa ngokulinganayo. Kodwa-ke, ngenxa yokuthamba okuncane iplanethi enakho endaweni yezigxobo, kubangela ukuthi ibanga lobubanzi lihluka.
Ngakolunye uhlangothi sinobude. I-Longitude iyona enikezela indawo yendawo phakathi kwenkomba esempumalanga noma entshonalanga kusuka kwimeridi eyinkomba eyaziwa njengeMeridian yeGreenwich. Ivezwa kusuka kumanani we-0 degrees kuye ku-180 degrees, kubhekiswa ukuthi ngabe kusempumalanga noma entshonalanga. Ngenkathi izinga lobubanzi lifana nebanga elicishe lifane, okufanayo akwenzeki ngezinga lobude. Lokhu kungenxa yokuthi imibuthano esikala ibanga leli iyahlangana iye ezigxotsheni. E-Ecuador kunesilinganiso sobude obulingana nebanga lamakhilomitha ayi-11132 futhi Kungumphumela wokuhlukanisa ububanzi be-Equator ngamadigri angama-360 ukuthi umjikelezo womhlaba unawo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi imephu yokuxhumanisa ihunyushwa kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Hlela Map